Horudhac: Manchester United vs Leicester City… (Red Devils oo markale dib u dhigi karta ku guuleysiga Premier League ee Man City) – Gool FM
(Manchester) 11 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta Machester United ayaa markale dib u dhigi karta dabaal-degga Manchester City ee ku guuleysigooda horyaalka Premier League, marka ay garoonkeeda Old Trafford caawa ku soo dhoweynayso kooxda dagaalka ugu jirta sidii ay kal ciyaareedka dambe ugu soo bixi lahayd Champions League ee Leicester City.
Red Devils ayaa guul soo laabasho ah 3-1 ka gaartay Axaddii naadiga Aston Villa, halka Leicester City la dhaawacay rajadeeda afarta sare ee horyaalka Premier League kaddib markii ay guuldarro xanuun badan kulankeedii ugu dambeeyey kala kulantay Newcastle United.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 08:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Kabtanka Kooxda Manchester United ee Harry Maguire ayaa qarka u saaran inuu seego kulankiisii ugu horreeyey ee horyaalka tan iyo markii ay kala soo saxiixdeen Leicester City sanadkii 2019-kii, sababo la xiriira dhaawac ka soo gaaray canqowga.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa isbadal dheeraad ah samayn doona, maadaama ay khamiista la ciyaari doonaan Liverpool kulan kale oo adag.
Leicester waxaa ka maqan Jonny Evans, kaddib markii uu soo laabtay guuldarradii Jimcihii ka soo gaartay Newcastle, maxaa yeelay waxa uu qabaa dhaawac ciribta ah.
Harvey Barnes, James Justin iyo Wes Morgan oo ka tirsan Foxes ayaa sii wadan doona maqnaanshahooda.
>- Leicester City ayaa kaliya guuleysatay labo jeer 29-keedii kulan ee horyaalka Premier League ay ku wajahday Kooxda Manchester United.
>- Guusha kaliya oo ay gaartay Foxes 22-keedii kulan ee horyaalka ay booqatay garoonka Old Trafford ayaa waxa ay timid 31-ka bishii Janaayo sanadkii 1998-dii, markaasoo goolka kaliya oo ay ku adkaadeen uu dhaliyey Tony Cottee.
>- Red Devils ayaa shabaqa soo taabatay 23-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaareen kooxdan tan iyo guuldaradaas, taasoo ah rikoorkoodii gooldhalineed ugu dheeraa ee horyaalka Premier League oo ay hal koox ka dhaliyaan goolal intaa la eg.
>- Manchester United ayaa kulankan ujeedkeedu yahay inay gaaraan guushoodii shanaad oo xiriir ah horyaalka Premier League, iyagoo ku ciyaaraya garoonkooda markii ugu horreysay tan iyo bishii Maarso sanadkii 2018-kii, markaasoo ay ka hoos ciyaarayeen Macallin Jose Mourinho.
>- Tani waa markii ugu horreysay ee Red Devils ay diiwaan gashato inay ku dhammaysatay afarta ugu sarreysa horyaalka Premier League labo xilli ciyaareed oo isku xiga tan iyo markii Sir Alex Ferguson uu ka fariistay shaqada tababarenimo.
>- Waxay badiyeen 10 kulan oo horyaalka Premier League ah kaddib markii laga dhaliyay goolka koowaad xilli ciyaareedkan, waana rikoorka koox ay hal xilli ciyaareed ka sameyso tartankan.
>- Marcus Rashford ayaa shan gool oo horyaalka Premier League ah ka dhaliyey Leicester City, waana in ka badan koox kasta oo kale oo uu wajahay.
>- Bruno Fernandes ayaa dhaliyey 27 gool tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, waa ciyaaryahanka khadka dhexe ee goolasha ugu badan u dhaliyey koox horyaalka Premier League hal xilli ciyaareed tan iyo Frank Lampard oo sidaas oo kale 27 gool u dhaliyey Kooxda Chelsea fasal ciyaareedkii 2009-10.
>- 10-ka Guuldarro ee xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League ku soo gaaray Leicester City ayaa kaliya labo ka mid ahi waxa ay ahaayeen kulammada bannaanka ee ay martida ahayd, waana 3-0 guuldarro ah oo ay ka soo qaadatay Liverpool 22-ka bishii November iyo 3-2 guuldarro ah oo ay kala soo kulantay West Ham United 11-ka bishii April.
>- Foxes ayaa labadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda aan wax guul ah soo gaarin markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan, caawana markale waa marti haddii ay guul ka gaari weyso Man Utd waxa ay noqon doontaa markii ugu horreysay oo saddex kulan oo xiriir ah oo ay bannaanka ku soo ciyaartay ay soo adkaan weyso xilli ciyaareedkan.
>- Waxa ay noqon kartaa kaliya kooxdii afaraad ee taariikhda horyaalka Premier League ee inta booqata Manchester United iyo Manchester City guryahooda kaga soo adkaata hal xilli ciyaareed, kaddib Everton xilli ciyaareedkii 1992-93, Middlesbrough (2003-04) iyo Liverpool (2008-09).
>- Tababare ahaan, Brendan Rodgers ayaa laga badiyay 10 kulan oo tartammada oo dhan uu ka horyimid Manchester United – waana in saddex ka badan koox kasta oo kale oo uu wajahay.
>- Kelechi Iheanacho ayaa dhaliyey 15 gool 16-kiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.